Madaxweyne Laftagareen oo hambalyo u diray dhammaan xoogsatada Koonfur Galbeed munaasabada 1-da May | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Laftagareen oo hambalyo u diray dhammaan xoogsatada Koonfur Galbeed munaasabada 1-da May
Madaxweyne Laftagareen oo hambalyo u diray dhammaan xoogsatada Koonfur Galbeed munaasabada 1-da May
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Glabeed Cabdi Casiis Xasan Laftagareen , ayaa munaasabada 1-da May oo ah maalinta Shaqaalaha adduunka, waxaa uu ugu hambalyeeyaydhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan xoogsatada Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha ayaa si gaar ah hambalyo ugu diray shaqaalaha heeganka ah si gaar ah Ciidamada qeybahooda kaladuwan ee kusugan deeganada koonfur galbeed kuwaas oo u taagan difaaca iyo ilaalinta nabad gelyada koonfur galbeed.
“Waxaan hambalyo halkan uga dirayaa dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan xoogsatada Koonfur Galbeed munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka ee 1da May awgeed. Waxaan ku bogaadinayaa dhabar adayga iyo kartida aad muujiseen, idinka oo waliba ku shaqeynaya xaalado adag. Waxaan xoojinaynaa sidii dhalinyareeda loo kordhin lahaa sidii loo shaqaalaysiin lahaa loogana faa”idayn lahaa sidii ay uga mid noqon lahaayeen shaqaalaha Soomaaliyeed.
sidoo kale laftagareen ayaa tilmaamay muhiimada ay leedahay in kor loo qaado tayada iyo tirada shaqaalaha kala duwan iyadoo diirada la saarayo baahiyaha jira isla markana la joogtaynayo kor u qaadista xirfadahooda si shaqooyinka ay hayaan ay u noqdaan kuwo waxtar leh.
Madaxweyne Laftagareen oo hambalyo u diray dhammaan xoogsatada Koonfur Galbeed munaasabada 1-da May was last modified: May 1st, 2021 by Admin
Xildhibaan Idiris Dhakhtar oo Farmaajo ugu baaqay in uu is casilo
Wasiirka Caafimaadka oo shaacisay in labo ruux ay u dhinteen Coronaviras 19 kalana uu soo ritey
Wada-hadallo Moscow uga bilaawday Armenia iyo Azerbaijan
Maamulka Jubaland oo war ka soo saaray dooda ah “Doorashaaba laga garramayee Gedo maxaa keenay?”
Wafdi ka socday Dowladda Somalia oo ka qeyb galay Shirka Booliska Bariga Afrika
QM oo walaac ka muujisay Go’aanka Itoobiya ku ceyrisay 7 Sarkaal